पौडेलको गिरफ्तारी : नेता कार्यकर्ताले कानुन मान्नु नपर्ने ? :: NepalPlus
पौडेलको गिरफ्तारी : नेता कार्यकर्ताले कानुन मान्नु नपर्ने ?
रायन सुबेदी२०७७ मंसिर १८ गते १७:५८
नेपाली कांग्रेसका वयोव्रिद्द नेता रामचन्द्र पौडेललाई तनहुँको पूल उद्घाटन गर्न गएका बेला प्रहरी निकायले पक्राउ गर्‍यो । यसपछि नेपाली कांग्रेस का नेता, कार्यकर्ता आगो भैहाले । कांग्रेस पक्षको भनाई, पक्राउ गर्नै हुन्थेन । सरकारले गणतन्त्रको उपहास गर्‍यो । निरंकुशता अपनायो । तिनले एकपक्ष रटाना लगाए । सरकार र कम्युनिस्टको उछित्तो काढिरहेका छन् ।
सरकार र कम्युनिस्ट पक्ष फेरि निशेधित क्षेत्रमा जान नपाउने नियमको अपहेलना गरेर नेता पौडेल किन गए ? के ठूला नेतालाई नियम र कानुन लाग्दैन ? कानुन सामान्य नागरिकलाई मात्रै लाग्छ ? पक्राउ गरेको केहि समयपछि रिहा गरिएपनि अहिले कांग्रेस र कम्युनिस्ट, सरकार र प्रतिपक्षमा गलफत्ती चलिरहेको छ । साँच्चै प्रश्न उठ्छ, रामचन्द्र पौडेल त्यहाँ जानहुन्थ्यो कि हुन्थेन ? पक्राउ गर्नु उचित हो कि अनुचित ?
निती, नियम र बिधीबिधानका कुरा नगर्ने सायदै कोहि भेटिएला । अझै राजनैतिक झुकाव भएका ब्यक्तिहरूले त झनै चर्का स्वरमा दिनहुँ यहि रटान लगाएका हुन्छन् । तर व्यवहारमा भने आफ्नै हिसाबले चलेका हुन्छन् । नेताहरूको त के कुरा नेतासँग कतै फोटोसम्म खिचेका कार्यकर्ताहरूले समेत नियम कानूनलाई चुनौती दिन पछि हट्दैनन् ।
एउटै घटनालाई व्यक्ति विशेष फरक व्याख्या हुन्छ । स्वभाविक हो । तर एउटै परिस्थितीको फरक ब्याख्या गरिनु उचित हो र ?
देश बिश्वव्यापी माहामारीबाट आक्रान्त छ । जनतालाई ज्यान जोगाउन र बिहान बेलुका हातमुख जोड्न धौ धौ परेको छ । यस्तो बिशम परिस्थितीमा नियम कानुनको कडा रूपमा पालना गर्नु सरकार, प्रतिपक्ष, कार्यकर्ता र जनता सबैको कर्तव्य हैन ? कि नियम र कानून साधारण जनताको लागिमात्र हो ? कानुनको अनादार गर्दा दण्डित सामान्य जनता मात्रै हुने कि नेतालाईपनि लागू गर्ने ? नेता कार्यकर्ताहरूलाई कानुन लाग्दैन ?
सरकारले ठूलो जमघट नगर्नु भन्ने आदेश दिन्छ । तर नेताहरू त्यसको अवज्ञा गर्छन् । नियम तोडेर कार्यक्रम गर्छन् । हुन त यसको अनादार प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंलेपनि गरेका हुन् । ताप्लेजुङमा हजारौं कार्यकर्ता भेला पार्दै आम सभा गरेर । न सत्तापक्ष न बिपक्ष, न त राजाबादीहरू सरकारको यो नियम मान्न तयार भएको देखिएन । ठूलाले गरेको देखेरै सानाले सिक्ने हो । नेताको देखासिकी कार्यकर्ताले गर्छन् ।
आगामी महाधिवेशनको तयारीको सिलसिलामा गृहजिल्ला पुगेका नेका नेता पौडेललाई प्रहरीले ज्यादती गर्यो भनेर दिनभरि सामाजिक संजालको भित्तो रङ्गियो । पूलको उदघाटन गर्न लागेको तर नियोजित रूपमा कार्यक्रम बिथोलियो भन्ने आरोप लगाउँछन् ।
प्रतिपक्षको धर्म गलत कामको बिरोध गर्नु जायज हो । तर कानूनले “नगर” भनेको गर्न खोज्नु अपराध हो कि हैन ? आजको प्रतिपक्षा हिजो सरकारमा थिएन र ? भोली फेरि सरकारमा जाँदा यहि कानुन चाहिन्न र ?
साधारणत : प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि सार्वजनिक ठाऊँमा कुनै कार्यक्रम गर्न प्रशासनको पूर्व स्विकृती लिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो माहामारीको बेला आयोजना गरिएको भनिएको उक्त कार्यक्रमको बारेमा पौडेल बाले पहिल्यै जानकारी लिएका थिए कि थिएनन् ? कार्यक्रमको निम्तो आएपनि पौडेलजत्तीको बुझक्किले यस्तो बेला ठूलो भेला नगरूँ भन्नुपर्ने हैन र ? त्यो पनि आफ्नै गृह जिल्लामा । सन्चालनमा आइसकेको पूल त जहिले उद्घाटन गरेपनि हुन्थ्यो होला ।
प्रशासनको स्विकृतीमा गर्न लागिएको कार्यक्रम हुन्थ्यो भने जुन प्रहरीले उनलाई गिरफ्तार गर्यो त्यहि प्रहरीले सुरक्षा दिएर कार्यक्रम गराउने थियो । प्रशासनले “नगर्नु” भन्दाभन्दै पौडेलले नटेरेको प्रहरीको आरोप छ । “हामीले हातै जोडेर क्रिपया बिन्ति छ नगैदिनुस् भन्दापनि टेर्नुभएन” भन्ने आरोप प्रहरीले लगाइरहेको छ ।
हुनत नेपाल प्रहरीलाई जो सत्तामा छ त्यसले भरपुर प्रयोग गर्ने गरेको त हिजोदेखिकै हो । शक्तिको दुरूपयोग हिजो नेपाली कांग्रेस, माले, एमाले, राप्रपा, पन्चे, मधेशवादी पार्टी सबैले गर्दै आएकै हुन् । आजपनि त्यो क्रम चलेकै छ जुन निन्दनिय हो ।
बिरोधका लागि बिरोध गर्नु एउटा पक्ष हो । तर कानून र नियमको पालना गर्नु नेताको पनि कर्तव्य हो । जनताको मात्र हैन । अब त जनता भएर सोच्ने कि ? कति कार्यकर्ताको नजरले मात्र हेर्ने ?
यसैसित संवन्धित अघिल्लो समाचार
पौडेलको गिरफ्तारी प्रती जनसंपर्क समितीहरु आक्रोशित